डाक्टरको लापरबाहीका कारण बालकको मृत्यु, डाक्टरकै कक्षमा बियर र चुरोट - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
डाक्टरको लापरबाहीका कारण बालकको मृत्यु, डाक्टरकै कक्षमा बियर र चुरोट
आवाज संवाददाता ७ आश्विन २०७३, शुक्रबार
दोलखा, असोज ७/प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालमा शुक्रबार एक बालकको मृत्यु भएको छ । डाक्टरको लापरबाहीका कारण बालकको मुत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तहरुले अस्पताल घेराउ गरेपछि अस्पतालमा दिनभर तनावग्रस्त बनेको थियो ।
झाडा, बान्ता र पेट दुख्ने समस्याका कारण अस्पताल भर्ना भएको भीमेश्वर १० का नवराज रिजालका अढाई वर्षका छोरा महादेव रिजालको मृत्यु भएको हो । अस्पताल भर्ना गरिएका उनको शुक्रवार दिउँसो १ बजे निधन भएको थियो । बालकको मृत्युका कारण अस्पताल तनावग्रत बनेपछि उपचारका लागि आएका विरामीहरुसमेत फर्किन बाध्य भएका थिए ।
पीडित पक्षले डाक्टरहरुको लापारवाहीका कारण बालकको निधन भएको दाबी गरेका छन् । बिहान ८ बजे पेट दुःखेर अस्पताल भर्ना गरेको बालकको उपचारका लागि दिउँसो १२ बजेसम्म डाक्टर नआएको मृतकका हजुरबा इन्द्रबहादुर रिजालले बताए । उनले भने, “आफ्नो नाति डाक्टरको लापरबाहीकै कारण उपचार नपाएर मृत्यु भए तापनि अरु सर्वसाधरणको ज्यान जोगियोस् ।”
बालकको निधनपछि उत्पन्न तनाव साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा भएको छलफलबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी औलाखबहादुर आलेको संयोजकत्वमा एक छानविन समिति गठनपछि तत्कालका लागि हटेको छ । छानविन समिति अन्य सदस्यहरुमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाका प्रमुख डा. राजेन्द्र साह, जिरी अस्पतालका प्रमुख डा. रोशन खत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत र पीडित पक्षका लक्ष्मी रिजाल रहेका छन् । समितिले ७ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गर्ने अख्तियार पाएको छ ।
डाक्टरको कक्षमै बियर र चुरोट
बालकको मृत्युपछि आक्रोसित भएका पीडित पक्षले लापहबाही गर्ने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली खोज्ने क्रममा डाक्टरको कक्षमै बियरका बोतल र चुरोट फेला पारेका छन् । डाक्टरहरुको कक्षनै पिच्छे बग्रेल्ती बियरका बोतलहरु र चुरोटका बट्टाहरु भेटिएपछि पीडितहरु झन आक्रोसित भएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले झन डाक्टरको लापरबाही भएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गरेका थिए । विरामी उपचार गर्ने संवेदनशील ठाउँ अस्पतालमा मदिराका प्रशस्त बोतल भेटिनु गम्भीर भएको सहायक प्रजिअ आलेले बताए । यसको पनि छानविन हुने उनको दावी छ ।
यसैगरी धादिङ थाक्रे घर भएका सिंगटी बजारमा मजदुरी गर्दै आएका वर्ष ५७ का हरि रेग्मीको सोही अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार साँझ नै ज्यान गएको छ । अरिङ्गालले टोकेर उपचारका लागि अस्पताल ल्याइएका उनको शुक्रवार साँझ मृत्यु भएको हो । उनका सहयोगी समेत कोही नभएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । सो अस्पतालमा लापरबाहीकै कारण विगत ८ महिनामा आधा दर्जनबढीको मृत्यु भैसकेको छ ।